Tombony - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Amin'ny maha mpamatsy fitaovana pumping efa hatry ny ela antsika, ny orinasanay dia voamarina amin'ny mari-pahaizana indostrialy maro toy ireto manaraka ireto:
Amin'ny indostrian'ny fampitaovana paompy, niavaka tamin'ny namany ny orinasanay noho ireto antony ireto:
1. Ny vidin'ny famokarana ambany sy ny vidiny mirary
Any amin'ny ivon'ny indostrian'ny paompy sinoa, tanàna Shijiazhuang, nanangana orinasa slurry matihanina ny orinasanay. Koa satria ny fitaovana ho an'ny paompy, ny vy dia manana vidiny ambany kokoa eto, mihena be ny vidin'ny famokarana anay. Izany no antony ahafahanay manome paompy azo antoka amin'ny vidiny mirary. Ankoatr'izay, ny tobin-pamokarana petrochemical pump dia miorina ao Dalian ary misy mpiasa za-draharaha sy matihanina.
2. Vokatra azo antoka sy kalitao
Amin'ny maha mpanamboatra fitaovana pumping antsika dia mifikitra hatrany amin'ny fitsipiky ny haitao sy ny kalitao isika. Ny paompy rehetra dia noforonina sy amboarina amin'ny teknika sy fitaovana mandroso iraisam-pirenena. Mandritra izany fotoana izany dia manome vokatra voatsinjara izay natao mifanaraka amin'ny fanovana takian'ny mpanjifanay izahay. Mampanantena izahay fa ny paompy rehetra omenay anao dia manana kalitao tsara sy fampisehoana azo antoka.
Mba hahazoana antoka fa manome fahafaham-po tanteraka ny zavatra takiana aminao ny paompy ampiasainay, dia nanangana rafitra fanaraha-maso kalitao sy rafitra henjana izahay. Afaka manome vokatra efa voamarina amin'ny marika CE, fenitra ISO9001 na fenitra indostrialy hafa izahay. Mandritra izany fotoana izany, afaka nanolotra firaketana fanaraha-maso kalitao sy tatitra mifandraika aminao izahay raha ilaina, toy ny "tatitra momba ny fananana ara-batana sy simika amin'ny akora ilaina amin'ny ampahany lehibe amin'ny paompy", "tatitra momba ny fifandanjana rotor", "tatitra momba ny fitsapana hydrostatic" ary ny "tatitra momba ny fizahana mialoha" . Amin'ny ankapobeny, raisinay ho zava-dehibe ny rohy rehetra amin'ny fifehezana kalitao, manome toky fa ny sampana pumping tsirairay mba hankafy kalitao tsara sy fampisehoana azo antoka.